Andriamifidisoa Zo · Mey 2014 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Mey, 2014
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Mey, 2014
Afrika Mainty 25 Mey 2014
Nitatitra ny L'Express Mada fa potika ny tanànan'Andranondambo ao atsimon'i Madagasikara [fr] nandritra ny adim-pokonolona niainga tamin'ny adi-tany. Nanomboka ny 20 ka hatramin'ny 22 mey, tsy nisy tafavoaka velona tamin'ny ady an-trano ny mponina ao an-tanàna ambanivohitra. Nampatsiahy [fr] ny iray amin'ireo zandary : A notre arrivée, un chien errant...
PetroPalestina: Fifandonana Hafa Eo Amin'ny Mpanohana Sy Ny Mpanohitra An'i Chavez Ao Venezoela
Palestina 25 Mey 2014
"Inona ny tombony azontsika amin'ny PetroPalestine?", Hoy ny fanontanian'ny Venezoelana any amin'ny media sosialy rehefa nanambara ny fifanarahana handefa solika sy gazoala any Palestina ny governemanta.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 Mey 2014
Voaheloka telo taona noho ny fanaovana kolikoly ny filohan'i Ejipta teo aloha Hosni Mubarak noho ny fanodikodinana volam-panjakana. Manontany tena ny bilaogera hoe maninona no maivana dia maivana ny didy fanamelohana.